एमाले महाधिवेशनमा सुरेन्द्र पाण्डेले राखे यस्तो अडान, के गर्लान् ओली ? - अन्नपूर्ण टाइम्स
एमाले महाधिवेशनमा सुरेन्द्र पाण्डेले राखे यस्तो अडान, के गर्लान् ओली ?
९ मंसिर २०७८ बिहीबार १३:०४
नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले महासचिवभन्दा सानो पदमा उम्मेदवारी नदिने बताएका छन् ।
१० नेता समूह’ का भए पनि लोकप्रिय छविका कारण पाण्डेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न शंकर पोखरेलभन्दा विष्णु पौडेल नै उपयुक्त हुन्छन् भन्ने मत ओलीपक्षीय नेताहरुको देखिन्छ।
विष्णु पौडेल नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपमहासचिव हुन् भने शंकर पोखरेल स्थायी समिति सदस्य मात्र हुन्। कनिष्ठ पोखरेललाई महासचिव स्वीकार गरेर उनी भन्दा वरिष्ठ र तीन वर्ष नेकपाको महासचिव समेत रहेका पौडेललाई ‘तपाईं यसपटक पनि उपमहासचिवमै प्रतिस्पर्धा गर्नुस्’ भन्न ओलीले पनि सक्ने छैनन्।